N. Korea: Nuclear Ayaan Ku Weerareynaa USA
Kuuriyada Koofureed ayaa xaqiijisay in Kuuriyada Woqooyi ay gantaal dhigtay xeebta bari ee dalka Kuuriyada, saacado kadib markii ay Pyongyang sheegtay in la gaaray ogolaanshihii ugu danbeeyey ee ah in la weeraro Mareykanka.
Wasiirka Gaashaandhiga ee Kuuriyada Koofureed Kim Kwan-Jin ayaa sheegay Khamiistan maanta ah in gantaalku uu yahay mid meel fog gaari kara hase ahaatee aanu awood u lahayn inuu duqeeyo dhulweynaha Mareykanka. Waxa uuna intaa ku daray in u jeedada talaabadan aan la garaneyn, laakiin laga yaabo in gantaalka loo adeegsan karo qeyb ahaan tijaabo iyo dhuula-tus.
Goor hore oo khamiistan maanta ah ayaa Kuuriyada Woqooyi waxa ay sheegtay inay isku raaceen qorshihii weerar nuclear ah loogu qaadi lahaa dalka Mareykanka, taasoo aan la hubin inay tahay wax ay awood uleedahay inay sameyso. Waxa ayna sidoo kale ku celisay hanjabaadeeda ah in dagaal uu qarxi karo xilli kasta.
Xoghaya Difaaca ee Mareykanka Chuck Hagel ayaa sheegay in Wasaaradda Gaashaandhigu ay si dhaba u qaadaneyso hanjabaadda, Hagel waxa uu sheegay Arbacadii shalay in Mareykanku ay si dhaqso ah gantaalaha wax difaaca u geyn doonaan jasiiradda badda Pacific-ga ku taalla ee Guam si ay uga hortagaan hadii la soo weeraro.
Pyonyang oo ka careysan cunaqabateyntii dhawaan ay Qaramada Midoobay ku soo rogtay barnaamjkeeda nuclearka, ayaa si joogta ah u soo saarta hanjabaado ka dhan ah Seoul iyo Washington